Ukufika kweWarzone 2100 4.0.0 kunye neNkxaso yoPhuculo lweeNjini zeMizobo kunye nokunye Ubunlog
Ukuphehlelelwa Inguqulelo entsha yomdlalo weqhinga "IWarzone 2100 4.0.0" apho enye yezona zinto zintsha zithandwayo yi ukuphuculwa kwenkxaso yeinjini zemizobo kwaye ngenkxaso eyongeziweyo yeVulkan 1.0+ ime ngaphandle.
Kwabo bangaqhelekanga ngomdlalo, kufuneka bayazi loo nto yaveliswa ekuqaleni yiPumpkin Studios kwaye yakhutshwa ngo-1999. Ngo-2004, imibhalo yokuqala yakhutshwa phantsi kwelayisensi ye-GPLv2 kwaye umdlalo uqhubekile nophuhliso loluntu.
Umdlalo uyi-3D ngokupheleleyo, Imephu kwigridi. Izithuthi zijikeleza imephu, ukuziqhelanisa nomhlaba ongalinganiyo kunye neeprojekhthi zinokuthintelwa ngokwenyani ziziduli neenduli
Ikhamera ihamba ihamba emoyeni ngokukhululeka okukhulu, ikwazi ukujikeleza nokusondeza. Yonke into ilawulwa yimpuku okanye ikhiphedi enenombolo Ekuhambeni kwedabi.
Umdlalo uza kusinika Umkhankaso, abadlali abaninzi kunye neemowudi zomdlali omnye. Ukongeza, siya kuba nakho ukusebenzisa umthi wobuchwephesha obanzi onobuchwephesha obungaphezulu kwama-400 ohlukeneyo, odityaniswe nenkqubo yoyilo lweyunithi, iyakusivumela ukuba sibe neendidi ezininzi zeeyunithi kunye namaqhinga.
1 Yintoni entsha kwiWarzone 2100 4.0.0?
2 Uyifaka njani iWarzone 2100 kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
Yintoni entsha kwiWarzone 2100 4.0.0?
Kule nguqulo intsha yeWarzone 2100, sinokufumana ifayile ye- yongeza inkxaso iinjini zemizobo ezintsha:
IVulkan 1.0+, i-OpenGL ES 3.0 / 2.0, iDirectX (ngokusebenzisa ilayibrari ye-libANGLE, i-OpenGL ES -> iDirectX), iMetro (ngethala leencwadi leMoltenVK, iVulkan -> Metal) kunye neprofayile ephambili ye-OpenGL 3.0+ (ekhethwe ngokungagqibekanga).
Olunye utshintsho olwahlukileyo kukuba yongezwe "Amacandelo" kubadlali abaninzi kunye nemidlalo ene-bots.
Kwakhona uphuculo oluninzi lubonakalisiwe, kubandakanya ibhalansi yomdlalo, kunye nokulungiswa kwe-bug kakhulu, ukusukela okokugqibela inguqulelo ezinzileyo, ngaphezulu kwe-1000 commits sele ithunyelwe ivela kubaxhasi abaninzi.
Ye- Olunye utshintsho olwahlukileyo kolu hlobo lutsha:
Wongeze uMlawuli woMculo, kunye neengoma ezintsha zeengoma zeLupus-Mechanicus.
Yongeze "iskripthi" / "esingahleliwe" umvelisi wemephu.
Yongeze incoko yokuskrolela i-lobby kunye nezinye izinto zokuphucula i-UI / iiwijethi.
Uhlaziyo kunye nophuculo kwi-AI bots (iBonecrusher, Cobra).
Imowudi entsha "engenantloko" yokuqhuba umdlalo ngaphandle kokubonisa imizobo (yesikripthi / yokubamba auto / yeebhot).
I-API ye-JS iphuculwe kwaye kongezwe "i-Debugger yeScript" entsha.
Qt kususwe ukuxhomekeka, kwasuswa kwi-QtScript yaya kwi-injini ye-JS entsha eyakhelweyo- i-QuickJS.
Iinguqulelo ezintsha zomdlalo weWindows 64-bit system (ye-Intel 64-bit / x64 kunye ne-ARM64), iMacOS
I-Universal Binaries ngenkxaso yemveli ye-Apple Silicon (ukongeza kwi-Intel 64-bit).
Okokugqibela kwabo banomdla wokukwazi funda ngakumbi ngayo Malunga nale nguqulo intsha, unokujonga iinkcukacha Kule khonkco ilandelayo.
Uyifaka njani iWarzone 2100 kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
Kulabo banomdla wokukwazi ukufaka lo mdlalo kwinkqubo yabo, kufuneka bazi ukuba abasebenzisi be-Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS kunye no-Ubuntu 20.10, kunye nolunye uvela kwezi, baya kuba nakho ukufaka umdlalo i snap package, ezinjenge flatpak okanye uguqulelo olukhoyo kugcino lokuhambisa.
Kwimeko yabo banomdla wokukwazi ukwenza ufakelo nge-Snap, kufuneka kuphela ukuba inkxaso ixhase (ye-Ubuntu 18.04 ukubheka phambili), yenza nje lo myalelo ulandelayo:
Ngoku kwabo bakhetha ukufaka lo mdlalo ngokukhuphela iphakheji yedeb, Bangayenza ngokuvula i-terminal kwaye kuyo baya kuchwetheza enye yale miyalelo ilandelayo, kuxhomekeke kuhlobo lwe-Ubuntu (okanye isiphumo) abasisebenzisayo.
Okwe abo usebenzisa Ubuntu 18.04 LTS Umyalelo ekufuneka bewenzile ulandelayo:
Kwimeko yabo bangabasebenzisi be Ubuntu 20.04 LTS kunye no-Ubuntu 20.10Umyalelo ekufuneka bewenzile ulandelayo:
Ngoku, ukuze ufake iphakheji ekhutshelweyo, sebenzisa oku kulandelayo kwisiphelo sendlela
Gqibela kwabo bakhetha ukufaka ngoncedo lweephakeji zePlppak, Kuya kufuneka babe nenkxaso enikwe amandla kwinkqubo yabo kwaye kwisiphelo sendlela baya kuchwetheza oku kulandelayo:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ubuntu » Imidlalo » IWarzone 2100 4.0.0 ifika kunye nenkxaso yokuphuculwa kweinjini zemizobo kunye nokunye
U-Baba Yaga unikezela ngenye indlela emnandi njengentsomi xa uzifumanisa ubambeke kwindlu yomthi wobugqwirha.
Phendula ku www.clongeek.com